November 2015 ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
အထူးသတင်း မြ၀တီကနေ MOU ၂ နှစ် Visaနဲ့လာတဲ့အခါ ( Update Date : 24/11/2015)
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Tuesday, November 24, 2015 News No comments
မြ၀တီကနေ MOU ၂ နှစ် Visaနဲ့လာတဲ့အခါ
၁။ သေချာစွာ ပွဲစာနာမည် မှတ်ထားပါ။
၂။ သေချာစွာ မြန်မာပြည်ဘယ်Companyကနေ ကိုယ့်နာမည်ကို ထိုင်းဘယ်Company နဲ့ လတ်မှတ်ရေးထိုး စာချုပ်ခဲ့လည်းဆိုတာ မှတ်ထားပါ။( ဘယ်အလုပ်လို့ပြောပြီ ချုပ်ထားလဲဆိုတာကိုလည်း မှတ်ထားပါ။)
၃။ ထိုင်းကိုရောက်လို့ သူတို့ဆီကနေ Workpermit ကို ရအောင်လုပ်ခိုင်းပါ။ (Workpermit စာအုပ်မရပဲ ခွဲမထွက်သွားပါနဲ့)
မှတ်ချက်။ ။ ထိုင်းမှာ ကိုယ့်လုပ်မဲ့Company ရှိလို့ ခွဲထွတ်မယ်ဆိုရင် Passport, Workpermit,ပြီးရင် သူတို့ဆီက Company ပြောင်းဖို့..လိုအပ်တဲ့စာရွတ်စာတမ်းတွေကို ရအောင်ယူပြီးမှ ပြန်ခွဲထွက်ပါ။ ( A-B နဲ့ပဲလာလာ ဘာနဲ့ပဲ လာလာ Workpermit ရမှ ခွဲထွက်ပါ။)
Workpermit မရှိပဲ မိတ်ဆွေတို့ ခွဲထွက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေတို့အလုပ်ရောက်တဲ့အခါ Workpermit လုပ်ဖို့ ၁၀၀ % အခတ်အခဲများစွာနဲ့ လုပ်မရပဲ…..ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ အဲဒီတော့ မ်ိတ်တွေတို့က လာခဲ့တဲ့ ပွဲစားကို ဖုန်းဆက်ရပြန်ရော…တခါတလေ..ပွဲစားက ဖုန်းမကိုင်၊ ဖုန်းကိုင်ပြန်တော့လည်း အင်..ပြန်ဆက်သွယ်ပေးမယ်..အင် ပြန်ဆက်သွယ်ပေးမယ် ဒါနဲ့ပဲ..မ်ိတ်ဆွေတို့ပဲ ဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်။
သူက လိုက်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့…ရေခဲတုံးကို ဖင်ထိုင်ထားရင်တော့ မိတ်ဆွေတို့ပဲ ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။
မြ၀တီMOU ရုံးမှာပေးထားခဲ့တဲ့ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာကဒ်မှာ ပါရှိတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
မှတ်သားထားတဲ့ မြန်မာပြည် Company၊ ထိုင်း Company နာမည်သိထားတော့….
ကဲ လိပ်စာကဒ်ပျောက်သွားတဲ့ အခတ်အခဲဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ အခုဆက်သွယ်လိုက်ပါတော့..
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဌာနခွဲ +၉၅-၆၇-၄၃၀၁၈၃၊ +၉၅-၆၇-၄၃၀၁၈၅ ဖုန်းခေါ်လို့ မရရင်
နေပြည်တော် Complaint Mechanism Centre
၉၅-၆၇-၄၃၀၁၈၄၊ ၉၅-၆၇-၄၃၀၂၈၄ ဖုန်းဖြင့် တိုင်ကြားလို့ရပါတယ်။
E-Mail- dolmigration@gmail.com နေပြည်တော် Thai Service သို့လဲ အီးမေးလ်ဖြင့် တိုင်းကြားလွှာပေးပို့လို့ရနေပါပြီး။
*အီးမေးလ်ပို့လျှင် Passport နဲ့ Visa တို့ကို Scan ဖတ်ပြီး Attach File ဖြင့်ပို့ပေးပါ။
*မှတ်ပုံတင် နံပါတ်၊ (နေရပ်လိပ်စာ အပြည်အစုံ)
*စာချုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်ကCompany နာမည်။
*စာချုပ်လာချုပ်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက Company နာမည်။
အကြောင်းအရာ။ ။ မိတ်ဆွေတို့ တကယ်ဖြစ်နေရ ကြုံနေရတဲ့ အခတ်အခဲတွေကို ပေးပို့ အကူအညီ တောင်းခံနိုင်ပါသည်။
ချက်ချင်း အကူအညီပေးနေပါသော် နေပြည်တော် Complaint Mechanism Centre (Thai Service) အားအထူးပင် ကျေးဇူတင်ရှိပါကြောင်းဖြင့်
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော မ်ိတ်ဆွေတို့အားလုံး အစစအရာအရာ အဆင်ပြေကြ
ကျွန်တော် ဒီည ဘန်ကောက်တက်ပြီး Workpermit သွားလုပ်ပါပြီး..
ပြန်လာရင် Update ပြန်ရေးပေးပါ့မယ်
ကျွန်တော့်ဆီ အီးမေးလ် ပို့ချင်ရင် linnaingookkm@gmail.com သို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
iOS 8 တွင် မြန်မာစာ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ထည့်သွင်းခြင်း
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Sunday, November 22, 2015 IphoneMMfontKeyboard No comments
အသစ်ထွက်ရှိထားသည့် iOS 8 တွင် မြန်မာစာကို အသုံးပြုလိုသူများအတွက် Zawgyi Font နှင့် မြန်မာစာ စာလုံးအားရိုက်ရန်အတွက် Keyboard ဖြစ်သည့် ttkeyboard ကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာစာ ထည့်သွင်းမည့် iPhone သို့မဟုတ် iPad တွင် ပထမဦးဆုံး Zawgyi Font ထည့်သွင်းရန်အတွက် အဆိုပါ Device များမှ Safari Browser ကို ဖွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ Safari Browser ထဲကိုရောက်ပြီဆိုလျှင် Address Bar တွင် http://t.co/WM70j6av69 အဆိုပါ လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပြီး Zawgyi Font ကို ထည့်သွင်းပေးရမည်ဖြစ်သည်။ Zawgyi Font ကို ထည့်သွင်းပြီးလျှင် General ထဲမှ Profile တွင် Zawgyi 2008 ဆိုသော ဖိုင်ကိုတွေ့မြင်ရမည် ဖြစ်သည်။
Zawgyi Font ထည့်သွင်းပြီးသွားပြီဆိုလျှင် မြန်မာစာ စာလုံးကို Keyboard ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ttkeyboard ကို ထည့်သွင်းရမည် ဖြစ်သည်။ ttkeyboard ကို ထည့်သွင်းချင်သူများအတွက် ဖော်ပြထားသည့် http://goo.gl/9JLP63 ဝက်ဘ်ဆိုက် လိပ်စာမှတစ်ဆင့် ttkeyboard ကို သွားရောက် ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး iTunes တွင်လည်း ttkeyboard ဟု ရိုက်ထည်ပြီး ရှာဖွေကာ ထည့်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထည့်သွင်းပြီးသွားလျှင် ttkeyboard ကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် Settings > General > Keyboards Keyboard >Add New Keyboard > ttkeyboard အစရှိသည်တို့ကို အဆင့်ဆင့်သွား၍ ရွေးချယ်ပြီး ထည့်သွင်းပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအဆင့်များအားလုံး ပြီးသွားလျှင် iOS 8 အသုံးပြုထားသည့် Device များတွင် မြန်မာစာကို အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။
Credit to http://kyaukphyuthar1.blogspot.com
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Saturday, November 21, 2015 Blogger No comments
Many have been asking me about this and I’ve decided to makeatutorial. So yeah, this is about how to haveabackground music that is hidden and autoplayed. It’s also very easy, you don’t have to sign up anywhere. Just Youtube.com (no need to have an account) ;]
Go to Youtube and choose your music. I suggest you click on the official music video. I’m going to use Safe and Sound as an example.
To make it hidden, change the width and height to “1”.
To make it autoplayed, add "?autoplay=1" after the “http://www.youtube.com/embed/WHATEVERISINHERE”
The code will look like this (if Safe and Sound):
<iframe width=“1” height=“1” src=“http://www.youtube.com/embed/RzhAS_GnJIc?autoplay=1” frameborder=“0" allowfullscreen></iframe>
Put the code in your description (don’t worry, it won’t show in your About Me ^_^) and voila! You haveahidden and autoplayed background music!
I hope I was able to help you (:
Credit to http://gabyswift.tumblr.com
နာက်ခံ၊သီချင်းထည့် ၊ စာတန်းထိုးနိုင်မယ့် Video Editor Master_1.1 APK
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Saturday, November 21, 2015 Android, AndroidApplication, AndroidVideomaker No comments
Android OS နှင့် Tablet ကိုင်ဆောင်ထားသော သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဖုန်းထဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို Video တွေကို တေးဖြတ် ကာလာအိုကေ စာတန်းထိုး ဝါသနာရှင်သူများအတွက် ဒီကောင်လေးက ပြုလုပ်ရတာ လွယ်ကူပြီး Effect တွေ့လည်း တော်တော်လည်း စုံအောင်ပါဝင်ပြီး နောက်ခံ သီချင်း ပြောင်း ၊ စာတန်းထိုး စတာတွေကို လိုသလို စိတ်ကူးကောင်းရင် ကောင်းသလို ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ Android OS Version 2.3 နှင့်အထက်ရှိထားတဲ့ဖုန်းတွေပေါ်မှာinstallလုပ်၍အသုံးပြုနိုင်မှာ
ကိုယ့်ရေးချင်တဲ့ ဘောလုံးအသင်းနာမည်နဲ့ နံပါတ်တွေကို အင်္ကျီပြုလုပ်နိုင်မယ့် Football Tshirt 3.02.APK
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Saturday, November 21, 2015 Android, AndroidApplication No comments
Android OS နှင့် Tablet ကိုင်ဆောင်းထားသော သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ကိုယ့်ရေးချင်တဲ့ ဘောလုံးအသင်းနာမည်နဲ့ နံပါတ်တွေကို အင်္ကျီပြုလုပ်နိုင်မယ့် Football Tshirt 3.02.APK လေး တစ်ခု တင်ပေးလိုက်တယ်နော်။ဘောလုံးဝါသနာရှင်များကတော့ အကြိုက်တွေစေမှာ သေချာတယ်။ပြောမနေတော့ပါဘူး ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ အောက်လင့်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ ခင်ဗျာ။
ကြိုတင်ထွက်လာတဲ့ ၂၀၁၆ မြန်မာပြက္ခတိန် Myanmar Calendar 2016 1.0.0 APK
Android OS နှင့် Tablet ကိုင်ဆောင်းထားသော သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ကြိုတင်ထွက်လာတဲ့ ၂၀၁၆ မြန်မာပြက္ခတိန်ကို ဖုန်းတွေမှာ ဆောင်ထားရန်အတွက် Myanmar Calendar 2016 1.0.0 APK လေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ဆောင်ထားချင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်က လင့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ ခင်ဗျာ။။
The description of Myanmar Calendar 2016
-Myanmar Public Holiday
-Include Pyat Tha Dar / Yat Ya Zar only
TEAM VIEWER 10 PREMINUM Crack File နဲ့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Friday, November 20, 2015 TeamViewer No comments
TeamViewer_Setup.exe ကို ဒေါင်းပြီး Install လုပ်ပါ.
နောက်ပြီး Crack File ထဲက TeamViewer .exe ကို ဒေါင်းပြီး Copy ကူားထားပါ..( Ctrl+C)
Install လုပ်ထားတဲ့ Desktop မှာ တွေ့ရတဲ့ TeamViewer 10 ကို R-Click ခေါက်ပြီး
Open File Location ကို နှိပ်ပြီး Paste လုပ်လိုက်ပါ..(Ctrl+V)
Download TeamViewer 10 Preminum with Crack
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Friday, November 20, 2015 AISLavafirmware, Android, androidfirmware No comments
ထုံးစံအတိုင်းပါဘဲ့တောင်းထားတဲ့လူလေးရှိတဲ့အတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းတောင်းထားတာလေးတွေနဲ့ နည်းပညာပိုင်းနည်းနည်းရေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာပါ AIS Lava Iris 708 Firmware ကိုမွေနှောက်ပြီးတော့ရှာနေရလို့ကြာသွားတာပါ ဒီ Firmware ကတော့ root ဖောက်ပြီးသားပါ လိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေကိုအောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ
Password တောင်းရင် www.minminchit.org လို့ရိုက်ထည့်ပေးပါ File Size ကတော့ 553 MB ရှိပါတယ်
AIS Lava Iris 708 Firmware
SP Flash Tool 5.1 Download
နားမလည်တာရှိရင် ဒီfacebook.com မှာလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်
Credit to http://www.minminchit.org